Fampiasam-bola : manamafy ny toerany ao Ambatovy ny Sherritt, Kanada | NewsMada
Fampiasam-bola : manamafy ny toerany ao Ambatovy ny Sherritt, Kanada
Noraisin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Zafilahy Ying Vah, teny amin’ny toeram-piasany, omaly, ny ambasadaoron’i Kanada eto Madagasikara, Rtoa Sandra Mc Cadell, miasa any Afrika Atsimo. Nanamafy io masoivohon’i Kanada io fa manohy ny asany hatrany ao Ambatovy ny Sherritt.
Na nampidina ny anjarany ho 12 % amin’ny renivola miasa ao Ambatovy aza ny Sherritt, orinasa kanadianina, manohy ny asany hatrany ity orinasa ity, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka hafa, Sumitomo japoney, tompon’ny renivola be indrindra ankehitriny, sy ny Korea Resources. Vokatry ny fidinan’ny vidin’ny nikela sy kobalta eo amin’ny tsena iraisam-pirenena izao fanapahan-kevitry ny Sherritt izao. « Manohy ny asanay hatrany izahay, manampy an’i Madagasikara eo amin’ny lafiny toekarena. Tsy amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany ihany akory izany», hoy Rtoa Sandra Mc Cadell.
Manan-danja amin’ny toekarena malagasy ny fitrandrahana ataon’ny Ambatovy, mampihodina vola 1 tapitrisa dolara isan’andro eto an-toerana. Io ny fampiasam-bola goavana indrindra eto Madagasikara. Vao tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, naseho teny amin’ny Carlton ny filoha vaovao, Stuart Mcnaughton, mitantana izany orinasa izany. Nisaotra tamin’ny ezaka efa vita hatramin’izay izy ary vonona ny hanohy izany amin’izao vidin’ny nikela sy kobalta latsaka ambany izao.
Tokony hahitan’ny faritra tombontsoa
Notsindrin’ny minisitra Zafilahy Ying Vah ny tokony hahitan’ny mponina tombontsoa manokana any amin’ireny faritra nivoahan’ireny harena an-kibon’ny tany ireny. Momba izay tombontsoa mivantana any amin’ny mponina izay, nambara ny asa ataon’ny DNI Metals, orinasa kanadianina ihany, any amin’ny fokontany Vohitsara sy Ambatolampy, kaominina Ambaninanony, distrikan’i Brickaville. Efa milamina ny disadisa any amin’ireo fokontany ireo. “Marihina fa mbola eo amin’ny dingana fikarohana ny DNI Metals, fa manao asa sosialy maro miaraka amin‘ny fanamboaran-dalana. Antenaiko fa rehefa tonga eo amin’ny fitrandrahana ry zareo, ho bebe kokoa izay fanampiana ny mponina izay”, hoy ny minisitra.